Mpitarika mpanohitra MMM, Paul Berenger : « Takinay ny marina nahatongavan’i Claudine aty Maorisy » | NewsMada
Mpitarika mpanohitra MMM, Paul Berenger : « Takinay ny marina nahatongavan’i Claudine aty Maorisy »
Manjavozavo tanteraka. Mitaky ny marina amin’ny nahatongavan-dRazaimamonjy Claudine atsy amin’ny Nosy Maorisy ny mpitarika mpanohitra MMM any an-toerana, Paul Berenger. « Manana zo hahalala vaovao marina momba izany ny vahoaka maorisianina. Iza nanome alalana azy hiditra eto ? Tsy misy mahalala ny fidirany eto na ny polisy na ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny maorisianina… Omeo vaovao marina ny vahoaka », hoy izy ny asabotsy teo, tamin’ny valandresaka nataony amin’ny mpanao gazety tatsy Maorisy. Notsiahiviny ny nambaran’ny ambasadaoro amerikanina, Robert Yamate, ny herinandro teo, ny amin’ny tokony hiverenan’ity tandapa ity an-tanindrazana sy ny hitsarana azy. Teo koa ny fanohanan’ny sehatra iraisam-pirenena ny ezaka nataon’ny Bianco. « Efa nahazo ny didy tsy fahazoana mivoaka any ivelany (IST) indroa izy io nefa mbola tafiditra sy nahazo alalana ho aty Maorisy ihany », hoy ihany ity lehibe mpitarika mpanohitra atsy Maorisy ity.
Nialoha izany anefa, nilaza ho tsy manana vaovao ofisialy momba ny fitsaboan-tenan’ity mpanolotsain’ny filoha Rajaonarimampianina ity ny governemanta maorisianina.
Efa any Dubai Razaimamonjy Claudine
Ankoatra izany, nambaran’ny gazety « lexpress.mu » atsy Maorisy, araka ny loharanom-baovao nalain’izy ireo amin’ny mpitandro filaminana eto amintsika ny faran’ny herinandro teo, fa efa tafaverina an-tanindrazana ny sasany amin’ireo niaraka amin-dRazaimamonjy Claudine.
« Efa tokony ho tonga aty Madagasikara ny alarobia 12 avrily teo ny iray amin’ireo efatra nandeha tany Maorisy. Ny loholona Andriamandavy Riana io. Ny hafa, ilay vehivavy mpiandry fonja sy ny mpitsabo azy, tokony ho tonga ny alahady teo », hoy ny nambaran’ity loharanom-baovaon’ny gazety atsy Maorisy ity.
Ny nalehan-dRazaimamonjy Claudine izany, hatreto, tsy fantatra hoe lasa aiza ? Niely ny feo fa efa lasa any Dubai ity tandapa ity, taorian’ny tatsy Maorisy. Matoa rahateo efa nody avokoa ireo niaraka taminy, efa tsy any amin’ity Nosy ity intsony izany izy ? Tsy mazava koa ny antony tsy nampihetsika ny fitondrana maorisianina manoloana ity raharaha ity. Miray tendro amin’ny fitondrana Rajaonarimampianina noho ny resaka tombontsoa manokana ? Anisan’izany ilay tetikasa Faritra ara-toekarena manokana (ZES) kasain’ny mpitondra atsy Maorisy hapetraka eto amintsika ?
Tokony hadihadiana ny loholona Andriamandavy Riana
Efa eto an-toerana koa izany ny loholona Andriamandavy Riana ka tokony hohadihadina momba io raharaha io. Manomboka amin’ny nitarihany ireo andiana olona teny amin’ny Bianco sy ny fanohintohinana narahina tora-bato teny an-toerana nandritra ny fihazonana sy fanadihadiana an-dRazaimamonjy Claudine. Efa nitaky ny hanadihadiana azy ny fiarahamonim-pirenena. Tokony hohadihadiana tahaka izany, koa ilay mpiandry fonja sy ny mpitsabo nanaraka azy tany Maorisy, hahalana ny mety ho nalehan’ilay tandapa…
Tsiahivina fa tokony hotanana am-ponja vonjimaika (MD) eny Antanimora, nanomboka ny 7 avrily teo, ity tandapa ity, saingy lasa nihazo an’i Maorisy tampoka ny 10 avrily maraina. Tsy hita hatramin izao hoe nankaiza.